နွေကျောင်းပိတ်ရက်နှင့် Summer School များ | Home
Home› Life› နွေကျောင်းပိတ်ရက်နှင့် Summer School များ› နွေကျောင်းပိတ်ရက်နှင့် Summer School များ
ပညာခေတ်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ ၂၁ ရာစုထဲမှာ သင်ယူစရာအတတ်ပညာရပ်၊ အသိပညာရပ်များစွာ ရှိနေပါတယ်။ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ကြမယ့် ကလေးငယ်တွေအတွက် အတန်းပညာရပ် အဆင့်ဆင့်ကို အောင်မြင်ပြီးစီးရန် လိုအပ်သလို ဗလငါးတန် (ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ္တ၊ ဘောဂ၊ မိတ္တ) နဲ့ ပြည့်စုံသော လူကြီးများအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးအရွယ်ရောက်လာရန်လည်း လိုအပ်သည်။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကောင်းမွန်ရန်၊ အထွေထွေဗဟုသုတများကို စာသင်ရင်းနှင့် ရရှိနိုင်စေရန် ဖွင့်လှစ် သော အထူးသင်တန်းကျောင်းများနဲ့ ကိုယ်ကာယဖွံ့ဖြိုးမှုအပါအ၀င် အခြားအနုပညာစွမ်းရည်များကိုပါ လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် နွေ သင်တန်းကျောင်းများအကြောင်း ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
“နွေရာသီမှာ Young Learner Course ကို ဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကလေးတစ်ယောက်စီမှာ ကိုယ်ပိုင် ကစားချိန်၊ စာသင်ချိန်တွေရှိရပါမယ်။ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူ ခေတ်စနစ်အရ ကျောင်းစာသင်ခန်းမှာ သင်ကြားရ ခြင်းက မပြည့်စုံမှုတွေရှိလာတယ်။ အထွေထွေဗဟုသုတ နည်းလာတယ် အားကစား၊ လူမှုရေး၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ အဓိက အင်္ဂလိပ်စာ စွမ်းရည် လျော့နည်းလာတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် နွေရာသီသင်တန်းကျောင်းတွေကို ဖွင့်လှစ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်”လို့ Nexus English Language Learning Centre မှ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံဖြစ်သူ ဒေါ်ရှယ်လီနန်ဟုမ်လိက်က ပြော ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘ၀ အောင်မြင်မှု သော့ချက်လို့လည်း ပြော၍ရနိုင်သလို အခြေခံလိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကို အခြေခံ ကောင်းကောင်းရရှိစေနိုင်ရန်သာမက (ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတ္တ၊ ဘောဂ၊ မိတ္တ) စတဲ့ဗလငါးတန် ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိစေရန် အတွက်ပါ ထည့်သွင်း သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားလိုက်တဲ့ အရာများကို ကောင်းမွန်စွာရရှိနိုင်ဖို့ သက်တောင့်သက်တာ ဖြစ်စေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအခြေခံတဲ့ သင်ကြားမှုစနစ် (Activities-Based)နဲ့ သင်ကြားသွားမှာ ဖြစ် တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သင်ကြားမည့် ဆရာဆရာမများကို ရွေးချယ်ရာတွင် သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကိုသာမက အရေးကြီးသော အရည်အသွေးဖြစ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေကို ချစ်ခင်ကြင်နာစိတ်ရှိသည့် အင်္ဂလိပ်မိခင်ဘာသာ စကားပြောဆရာ၊ ဆရာမများကိုသာ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ British Council အသိအမှတ်ပြု University of Cambridge သင်ရိုးညွှန်းတန်းများ အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီး အဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးဆုံးသွားတိုင်း Nexus မှ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ထုတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများ အတွက် အစဉ်ပြေစေရန် သင့်တင့်သောကျောင်းလခကို စီစဉ်ပေးထားပြီး မောင်နှမများအားလုံးတက်ရောက်လျှင် ကျောင်းလခ လျှော့ပေးခြင်း၊ နှစ်စဉ်တက်ရောက်သည့် ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းလခလျှော့ပေးခြင်း၊ အစောဆုံးအပ်နှံသည့် ကျောင်းသား များအတွက် ကျောင်းလခလျှော့ဈေးအစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကျောင်းသားများ သွားလာရေးလွယ်ကူစေရန်အတွက် ကျောင်းဖယ်ရီများလည်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
May International School
May International School တွင်လည်းနွေရာသီကျောင်း ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာ ကျောင်း(၁၅)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် နွေရာသီသင်တန်းအတွက် ပညာသင်ဆုများလည်း ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ပညာသင်ဆုကို အဓိကအားဖြင့် အစိုးရအခြေခံ ပညာကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများကို အဓိက ရည်ရွယ်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကာ မည်သည့်ကျောင်းသားမဆို အရည်အချင်းစစ် စာမေး ပွဲများကို ဖြေဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ဆုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားများရ ရှိသည့် အမှတ်ပေါ်မူတည်၍ ဆုများပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရမှတ် ၉၆-၁၀၀ အတွင်းရရှိသော ကျောင်းသားများကို ပညာသင် ဆုအပြည့်အ၀ ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ရမှတ် ၈၁-၉၅ အတွင်းကို ကျောင်းလခရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရမှတ် ၇၁-၈၀ အတွင်းကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရမှတ် ၆၁-၇၀ အတွင်းကို ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရမှတ် ၅၁-၆၀ အတွင်းကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းစတဲ့ ပညာသင်ဆုများ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကို မတ်လမှ မေလအထိ ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး University of Cambridge သင်ရိုးများအတိုင်း အဆင့် ၅ ဆင့်ခွဲပြီး သင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းတွင် သင်ကြားသွားမည့်ပုံစံမှာ ကျောင်းသားများအား အိမ်စာပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် အိမ်ကိုပင် ကျောင်းစာအုပ် များကို ပြန်သယ်ခိုင်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကို နွေရာသီသင်တန်းမှာ ဖိစီးမှုလုံးဝမရှိဘဲ အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်စေမယ့် သင်ကြားမှုပုံစံများနှင့် သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာ အဓိကနဲ့အထွေထွေဗဟု သုတများကိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထို့အပြင် အစိုးရအခြေခံကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများနှင့် International School မှ ကျောင်းသားများကို အတူတကွ သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းသားနှစ်မျိုးကြား ကွာဟမှုများကိုပါ ဆက်စပ်ပေးသွားနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးရှိကြောင်း ထပ်ဆင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ အခြေခံကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများ၏ ဆရာမိဘအပေါ် ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှု နီတိကို International School များမှ ကျောင်းသားများ ရရှိသွားနိုင်သလို ထိုကျောင်းသားများရဲ့ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိခြင်း အရည်အ သွေးကိုလည်း အခြေခံကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများ ပိုင်ဆိုင်သွားသည့် အကျိုးကျေးဇူးမျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Summer School ပြီးနောက် ကျောင်းကြီးတက်သည့်အချိန်မှာ ထိုအရည်အသွေးများက ကလေးများကို များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်တာကို တွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ ကလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်စေရန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အားကစား စတဲ့အရာတွေ လုပ်ဆောင်ရင်း အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး နွေရာသီသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနွေရာသီသင်တန်းကို Horizon International School စတင်တည်ထောင်သည့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ အသက်အရွယ်အလိုက် အဆင့်များခွဲထားပြီး အသက် ၄ နှစ် Pre ၊ ၅ နှစ် KG ဆိုပြီး အသီးသီးခွဲထားပါတယ်။ အသက် ၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အထိ Young Learner အတန်းမှာ ၀င်ခွင့်အရည်အချင်း စစ်ဆေးတဲ့စာမေးပွဲများကို ကျောင်းတွင် အခမဲ့ဖြေဆိုနိုင်ပြီး သက်ဆိုင် ရာအတန်းသို့ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းတွင် University of Cambridge သင်ရိုးများအတိုင်း သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီး မူရင်း သင်ရိုးစာအုပ်များ (Original Text Book) များကိုသာ အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မိခင်ဘာသာစကားပြော ဆရာဆရာ မများမှ Orientation-Based နည်းစနစ် အသုံးပြုပြီး သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Horizon International School မှ ဖွင့်လှစ်သော နွေရာသီသင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်တိုးတက်လာပြီး အဓိက နိုင်ငံခြားသားများနှင့် ပြောဆို ဆက်ဆံဖို့ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိလာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Horizon International School မှ ပုံမှန်အတန်းများသို့ တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲများဖြစ်သော ရေးဖြေနဲ့ နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲများအတွက် အခြေခံကျသော အရည်အသွေးများကို နွေရာသီသင်တန်းမှ ရရှိနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကလေးတွေ နွေရာသီမှာ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာခြင်းဖြင့် အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး Young Learner Class ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၁ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အထိတစ်တန်း၊ ၁၄ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အောက် တစ်တန်း၊အတန်းများခွဲပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးထားကာ Speaking Test ဖြေဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီသင်တန်းတက်ပြီးပါက ကျောင်းသားဟောင်း စာရင်းဝင် သွားပြီး အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးပါက Edulink Australia က ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိသော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကို Old Student Discount ခံစားခွင့်ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကြားမှုအပိုင်းတွင်လည်း သင်ကြားမှု အရည်အချင်းပြည့်မီသော အတွေ့ အကြုံရှိ အင်္ဂလိပ်မိခင်ဘာသာစကားပြော ဆရာ၊ ဆရာမများမှ သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်တန်းတက်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာ နိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူးများတွင် အင်္ဂလိပ်မိခင်ဘာသာစကားပြော ဆရာ၊ ဆရာမများသာ သင်ကြားမည်ဖြစ်သောကြောင့် အင်္ဂလိပ် စာကို ကောင်းမွန်စွာ တတ်ကျွမ်းလာနိုင်မည့်အပြင် အင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်း ပို၍ပြောဆိုလာနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများလည်း ပါဝင် ပါတယ်။
La Peintre Drawing School
နွေရာသီအထူးပန်းချီ သင်တန်းက ကျောင်းသင်ခန်းစာ အထောက်အကူပြု ပန်းချီများရေးဆွဲနိုင်ရန်နှင့် ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူး ဉာဏ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခြေခံပညာ ကျောင်းသားများ ကျောင်းသင်ခန်းစာ စာအုပ်ထဲတွင် ပါဝင်သည့် ပုံလေ့ကျင့်ခန်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ရန်နှင့် International School မှ ကျောင်းသားများ အနု ပညာချိန်တွင် အရည်အချင်းပိုမို တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဓိက Sketching (ပုံကြမ်းရေးခြစ်ခြင်း)ပိုင်းကို ဦးစားပေး သင်သွားမှာဖြစ်ပြီး Colour Painting ပိုင်းကိုလည်း သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၄ ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ဒီသင်တန်း မှာ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ သင်ခန်းစာများကို အသုံးပြုပြီး သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းချီဆွဲခြင်းဖြင့် လက်ချောင်း တွေကို သန်မာစေကာ လက်ရေးလှစေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကို အားကောင်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင် အရောင်များ၊ အရုပ်များ ရေးဆွဲရခြင်းကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းရည်လည်း မြင့်မားလာနိုင်စေပြီး ဒီသင်တန်းကနေ ပန်းချီပညာကို ၀ါသနာပါတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် အနာဂတ်မှာ ပန်းချီပညာကို သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်တစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည် အသုံးချနိုင်အောင်အထိ ရည်ရွယ်ပြီး သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Uranium Dance School
Uranium Dance School မှ နွေရာသီတွင် Special Summer Program ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ချိန်မှာ အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Uranium Dance School မှ ကိုဇေယျာက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခု ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် (၆) ကြိမ်မြောက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျောင်းသင်ခန်းစာများ၊ စာမေးပွဲများနှင့်သာ လုံးပန်းနေရသော ကလေးငယ်များကို မွန်းကြပ် မှုမှ လွတ်မြောက် နိုင်စေရန်၊ ကလေးငယ်များရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ကူညီနိုင်ရန် ရည်ရွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအကသင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် အကနဲ့ပတ်သက်ပြီး Beat ကို နားလည်လာကာ စည်းချက်ညီညီနဲ့ သီချင်းအမျိုးအစားအလိုက် စနစ်တကျ ကတတ်လာမည့်အပြင် ကလေးတွေကို ပျော်ရွှင်လွတ်လပ်မှုကို ခံစားရစေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများပါ ရရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ သင်တန်းကျောင်းများထဲမှ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးများရဲ့ ၀ါသနာနဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုအပေါ် အခြေခံပြီး သင့်တော်တဲ့ သင်တန်းကျောင်းများကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ချိန် သင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက် လို့ Nexus English Language Learning Centre မှ ပညာရေးအတိုင်ပင်ခံဖြစ်သူ ဒေါ်ရှယ်လီနန်ဟုမ်လိက်က ကျောင်းသားနှင့် မိဘများကိုအကြံပေးပြောကြားခဲ့ရာတွင် “ဘယ်လို သင်တန်းကျောင်းများကို ရွေးချယ်တက်ရောက်သည် ဖြစ်ပါစေ၊ ကျောင်းသားရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုသည်ကသာလျှင် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Levels - Starters, Movers, Flyers, KET, PET
Starting Date - Monday, March 10, 2014
Time - Smart Kids I, II ( 9:30 a.m to 12:00 p.m )
Smart Kids III, IV, V (2:00 p.m to 4:30 p.m )
Contact - No. 08, Ground Floor, Panchan Tower,
Dharmazedi Rd., Myaynigone, Sanchaung Tsp., Yangon.
Tel: 01 539-581, 5
သင်တန်းချိန် - နံနက်(၆း၃၀) နာရီ မှ (၈း၃၀) နာရီ
နံနက် (၉း၀၀) နာရီ မှ (၁၁း၀၀) နာရီ
သင်တန်းစတင်မည့်ရက် - ၅.၃.၂၀၁၄
သင်တန်းရက် - အင်္ဂါ မှ စနေ အထိ
ဆက်သွယ်ရန် - အမှတ်(၃၄)၊ ဆရာစံလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။
ဖုန်း - ၀၁ ၅၄၂၇၄၉၊ ၀၁ ၄၀၁၄၆၇၊ ၀၉ ၇၃၂၂၄၀၅၉ ။
Levels - Basic, Advanced, Sketching, Painting, Human Figuring,
Cartoon Drawing, Map Drawing, Art & Crafts
တန်းခွဲ - (၅) ယောက်သီးသန့် (၁ သိန်း ၃ သောင်း)
(၁၀) ယောက်သီးသန့် (၈ သောင်းခွဲ)
အယောက်(၃၀) တန်း(၅ သောင်းခွဲ)
သင်တန်းချိန် - One section- 1:30 hr
သင်တန်းစတင်မည့်ရက် - မတ်လ ၂၀၁၄
သင်တန်းရက် - အင်္ဂါနေ့တိုင်း ပိတ်သည်။
(နွေရာသီသင်တန်း- ၂၂ ရက်)
ဆက်သွယ်ရန် - အမှတ်(၁၀)၊ အလယ်လမ်း (ဟုမ်းလမ်းအောက်)၊ ဆေး။ငြိမ်း ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
ဖုန်း- ၀၉ ၅၀၆ ၄၄၄၉၊၀၉ ၂၅၄၀၆ ၄၄၄၉ May International School
Starting Date - 3rd March 2014
Day & Time - Monday to Friday (7:00 am to 5:00 pm)
Saturday & Sunday (9:00 am to 5:00 pm)
Contact - No.(91-A), Banyadala Road, Bahan Tsp, Yangon.
Ph: 01 544 224, 01 545 375
Programs - Core Program (4 skills)
Full Day (4 skills + Sports)
Starting Date - 10th March 2014
Time - 8:00 am to 2:00 pm
8:00 am to 4:00 pm (Full Day)
Contact - No. 25, Po Sein Road, Bahan Township, Yangon.
Ph: 01-551795, 551796, 548452, 450396, 511595
Program - Special Summer Program
Date - 4th March, 2014 to End of May, 2014
Day - Tuesday, Wednesday & Thursday
Time -11:00 am to 8:30 pm
(One Section- 1:30 hr)
Contact - 2nd Floor, Building C , Pearl Condo, Kabaraye Pagoda Road,
Ph: 09 73142624, 09 421118371
Levels - Teenage 1 (11 years to 13 years)
Teenage2(14 years to 16 years)
Time - 9:30 am to 4:30 am
(One section –2hr)
Contact - Building 4, Junction Square Pyay Road, Kamaryut Township Yangon, Myanmar.
Tel: 09-73162586, 09-421119895, 09-73196350
Levels - Pre-school3to6Years (Nursery, Pre-KG, KG)
Young Learners6to 14 Years (Begineer, Foundation 1~6)
Starting Date - 3rd March 2014 (Pre-school)
7th March 2014 (Young Learners)
Day & Time - Monday to Friday (9am to 12pm) Pre-school
Monday to Friday (9am to 12pm)(1:30pm to 4:30pm) Young Learners
Contact - (Center 1) ၊အမှတ်(၁၈)၊ မြေနုလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း။
ဖုန်း- ၅၃၇၈၉၅၊ ၅၀၂၇၇၅
- (Center 2) ၊ အမှတ် (R-11)၊ ကံ့ကော်လမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မြကန်သာအိမ်ယာ၊ လှိုင်မြို့နယ်။
ဖုန်း- ၅၃၀၀၉၇၊၀၉ ၂၅၄၁၄၈၀၀၅
- (Center 3) ၊ အမှတ်(၂၇)၊ (၁၆၅)လမ်း၊ တာမွေကြီး(ခ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။
ဖုန်း- ၅၄၉၅၉၀၊၀၉ ၂၅၄၁၄၈၀၀၆